Gali nambarka bogga LibreOffice | Laga soo bilaabo Linux
Haddii ay jiraan wax aanan istaagi karin, waxay la shaqeyneysaa codsiyada Xafiiska. Laakiin nasiib daro, waa inaan kaqeyb qaataa adeegsadayaasha laqabsanaya geedi socodka socdaalka, qaarna isbedelka MS Office a LibreOffice xoogaa way adagtahay.
Mid ka mid ah howlaha ugu caansan ee dadka isticmaala maalin kasta i weydiiyaan ayaa ah: Sideen ku dhejiyaa lambarka bogga, laakiin lambarka koowaad wuxuu ka bilaabmaa bogga aan doonayo?
Mana ahan wax kayar inay layaabaan sida loo sameeyo wax sidan oo kale ah, maxaa yeelay si cadaalad ah, howshu sidaa uma muuqato. Aan aragno sida loo sameeyo.
1 Bilaabista nambarka bogga labaad
2 Bilaabista nambarka bog kale
Bilaabista nambarka bogga labaad
Ka soo qaad inaan haysanno bogga ugu horreeya ee loogu talagalay Dabool (buugga maalin maalmaha ka mid ah waa inaan qorno oo aan daabacno intaanan dhiman) waxaanan rabnaa bogga #1 noqo kuwa soo socda, taasi waa, bogga 2.
Waxaan tagnaa bogga koowaad, oo waxaan riixnaa furaha F11 si loo bilaabo Tifatiraha Qaabka iyo Qaabka. Hadhow waxaan aadeynaa Qaabka Bogagga waxaanan hubinnaa in liiska hoos-u-dhaca ah ee hoose lagu calaamadeeyay oo dhan qaababka.
Hadda, haysashada dulqabo bogga koowaad ee dukumiintiga (kaas oo noqon doona daboolkayaga), tifaftiraha Qaabka iyo Qaabka laba jeer ayaan gujineynaa Bogga koowaad.
Waa inaan ku helnaa wax sidan oo kale ah Tifatiraha Qaabka iyo Qaabka:
Hadda waa inaan tagnaa liiska kore oo guji Geli »Buugga Buugga, waan doorannaa Bogga jab con Nooca Asalka ah iyo ikhtiyaarka Beddel lambarka bogga calaamadeeyay.
LibreOffice waxay noo abuureysaa bog kale oo maran. Hada aan yeelno Geli »Lugta» Qaabka Asalka ah. Calaamadda ayaa si otomaatig ah u aadeysa salka bogga iyo marka ay halkaas joogto, ugu dambayntii waan samayn doonnaa Geli »Goobaha» Lambarada Bogga. Taasi waa taas.
Waayahay, waa hagaagsan tahay, laakiin kawaran hadaan rabno inaan ku dhigno lambarka bogga koowaad bogga 4aad, 5aad ama 10aad?
Bilaabista nambarka bog kale
Kahor intaadan galin qaybtaan waxaa wanaagsan in la cadeeyo taas LibreOffice xisaabta ku dareyso haddii boggu yahay Bidix o Xaqso, sida buugga ku jira. Haddii aan eegno xitaa lambarrada waxay ku aadaan bogga "bidix" iyo tirooyinka aan caadiga ahayn ee ku yaal bogga "midig".
Dhab ahaan qaybtaan waxaan ku sameeyay imtixaanada anigoo isla isticmaalaya Bogga bidix in Bogga saxda ah gudaha Tifatiraha Qaabka iyo Qaabka. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ku celinaa isla hawshii hore.
Farqiga ayaa ah in aan iska dhigno bogga kahor midka aan dooneyno inaan helno lambarka 1, iyo halkii aan ka dooran lahayn Tifatiraha Qaabka iyo Qaabka doorashada Bogga koowaad, waxaan xulanaa Bogga saxda ah o Bidix, waxay kuxirantahay qiimaha ay geliyeen xogta Buugga Buugga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Gali nambarka bogga LibreOffice
Ilaah baan ku dhaartaye, anigu waxaan ahay mid ka mid ah taageerayaasha barnaamijyada bilaashka ah iyo kuwa dhiirrigeliya horumarkiisa iyo adeegsigiisa, laakiin sida muuqata waxaan aad uga fog nahay in aan yeelanno Suite Office oo runtii la kulma rajooyinka isticmaalayaasha.
Ilaa iyo inta ay wax socdaan waxaan sii wadaa inaan xafiiska ku daydo khamri.
Ku jawaab Yoandry
Salaan Yoandry iyo soo dhowow:
Waa runtaa oo waxaan idhi shaqadu xoogaa waa dhib badan tahay, laakiin uma baahnid inaad dabbaasho Amazon dhexdeeda. 😉
Hadana dadka yar ee isticmaalaya, dhibkuu sii korin doonaa dhibku, markaa nasiib daro waxaad dhahdo waxay noqoneysaa wax xoogaa anfaca 😉
Waxa loo baahan yahay maahan dadka adeegsada, laakiin shirkado qaar ayaa isla markiiba dhigaya 50/100 kun oo doollar, oo nolol siinaya suunka xD.
Waa run. Sidoo kale waa run in dad badani isticmaalaan, laakiin sida muuqata cidina kuma dhibsan faahfaahinta kuwan oo kale ah, lama soo sheegin waana taas sababta, macquul ahaan, in tallaabooyinkan aan la beddelin ama aan loo fududeynin
@Yoandry Ma arko sida ay culeys u tahay runti, marka laga soo tago Windows-ka ma ahan in socod yar uu jiro, maxaa yeelay si aad u sameyso waxyaabahan waa inaad siisaa qaabka saxda ah dukumiintiga si lambar-otomatiga loo sameeyo si sax ah, oo i rumee waxaa jira dad badan oo aan ogahay oo sameeya kuwaas oo madax xanuun siiya.
runti daaqadaha waxaad kaliya ka abuureysaa qeybta biririfta, ka dib waxaad aadeysaa lambar iyo halka ay ku qoran tahay ka bilow: waxaad dhigeysaa 1.
Micno malahan gabi ahaanba laakiin nasiib daro way fududahay.
http://office.microsoft.com/es-es/word-help/el-numero-de-paginas-de-forma-diferente-en-distintas-secciones-HA101832542.aspx office.microsoft.com waxay culeyska ka qaadeysaa doodaada th ..tani ma sahlana MS Office
Ku jawaab indiolinux
Uma arko mid culeys badan, waxa dhacaya ayaa ah in kastoo ay nala mid tahay annaga oo kale, Qoraa waa eray-sameeye halka MS Word uu yahay eray-sameeye, taasoo ka dhigaysa barnaamijyo ujeeddooyin kala duwan leh. Waxayna u muuqan kartaa shaqooyinka fudud midka hore waa mid aad u dhib badan, laakiin qaababku waa aalad aad u awood badan (iyo MS Word si aad u liidata ayaa loo hirgaliyay runta) markay tahay sameynta dukumiinti aad u qalafsan sida buugaagta qoraalka.
Laakiin ha i rumaysan, waxaa jira buug aad u fiican oo qoraaga ah oo la yiraahdo Mastering the Writer halkaasoo dhammaan noocyada arrimahan la soo bandhigo waxayna leeyihiin tayo aan caadi ahayn oo ay qortay RGB-es, oo si fiican loogu yaqaan AOO / LO forumyada caawimaadda oo sidoo kale ah qayb ka mid ah mashruuca Apache OO.
Kudayashada xafiiska khamriga ... sababta oo ah lambarka bogga? Kaalay ...
Ma aqaano sababta aad sidaas u tiri, ma jiraan wax ka dhumuc weyn tirada iyo erayga bogga. LO ima siinin wax dhibaato ah oo dhaafsiisan dib udhaca qaarkood, waxaana ku adeegsadaa shaqada, runti kuma haysto Window $ shaqadeyda pc (ama midkood, lol).
sharraxaadda waa mid dhib badan maahan howsha. Waxa muhiimka ahi maaha geedi socodka laftiisa laakiin waa fikradda. Marka laga hadlayo geedi socodka MS Office iyo LOffice labadaba, waxay ubaahantahay talaabooyin dhowr ah laakiin taasi maahan waxa ay tahay in la barto laakiin waa fikirka.
LOffice-ka bog aan lahayn lambar bog waa 'Bogga qaabka X' bog kale oo leh lambar bog waa 'Bogga qaabka Y' ... Waxaad dib ugu bilaabi kartaa lambarka sida iyo goor kasta oo aad rabto ama ka saari karto meel kasta oo dukumintiga ah, kaliya haddii aysan ahayn Waad dooneysaa, waxaad bogga u siisay qaab ahaan 'X', haddii aad dooneysid, haddii aad dib u bilowdo ama aad u sii wadato, waxaad siineysaa qaabka bogga 'Y' .. aniga waxay ila tahay inaan qori doono wax aan ku dhahayo si ka wanaagsan… ..
Taasi waxay tidhi, habka loo maareeyo su'aashan LOffice waxay ila tahay sida ugu saxsan aniga: LOffice waxay maamushaa Styles Page, oo ah wax MSOffice ka maqan. MSOffice waxay ku sameysaa 'Qeybaha', laakiin kuma filna LOffice waxaan haysanaa 'Qaab-Bogga' marka lagu daro farxadda 'Qeybaha'
Waxaan joogayaa xafiiska MS Office sidaas darteedna waan iska ilaaliya madax-xanuun.
Aan aragno, waxay ku sharaxeysaa 3 sadar waxa howsha dhimista ka ah MS Office taasoo kaa badbaadinaysa madax-xanuun mawduuca maqaalka
Ha ka welwelin waxa ku saabsan indiolinux. Hades Hades dhaho MS Office wuu ufiicanyahay ama uga fududyahay asbaabihiisa. Yaanan bilaabin dood MS Office vs LibreOffice.
Si fiican ayaan u aqaan sida dhibsiga faallooyinka noocan ah u noqon karo, indiolinux, gabi ahaanba waa nadiif yihiin xitaa waa nacasnimo, laakiin qof kastaa wuxuu xor u yahay inuu doorto oo sheego waxa uu doonayo, si kasta oo doqon u tahay xaqiiqda ... Isku day inaad weydiisato qof inuu kuu sharaxo wax, waa iska caajis.
xD waa dhadhankeyga, uma baahni inaan sharaxo sababta xafiiska MS uu uga sareeyo LO / AOO.
Elav, tayada balooggu waa in la difaaco illaa dhimashada, wax kasta oo faallo iyo faallo xambaarsan waa in isla markiiba laga saaraa. Dadku aad ayey ufiirsadaan ugana doodaan "faallooyinka" noocan ah, iyaga oo aad uga maqnaa dulucda maqaalka la daabacay laftiisa, kaas oo badiyaa ah tayo aan la qiyaasi karin
Waad ku mahadsantahay sharraxaadda, laakiin waa wax laga xumaado in LibreOffice uusan si fiican ula jaanqaadin xafiiska MS Office.
Waxaan u sameeyay sidaas oo kale ... sida aad ku sharaxday maqaalka iyo ... faylka aan ka shaqeynayay markii aan ku soo noqday in laga furo MS Word wuxuu ahaa **** !!!
Lambarada boggu way ka laba jibaarnaayeen wixii ay ahaayeen, sawirro qaar oo uu ku lahaa daboolka wuu tirtiray ... si kastaba ha noqotee ... inta aan rabo inaan la qabsado LibreOffice oo aan la shaqeeyo, dadku weli waxay adeegsadaan MS Office mana laga habeyn karo sidaasna ku jirta labada barnaamijba, aad baan uga xumahay mashiin kumbuyuutareed waxaan ku rakibayaa Windows si aan u dhigo MS Office-ka oo aan uga dhex shaqeeyo, illaa iyo inta uu ka shaqeynayo "guurka" labadan qolal xafiis.
Su'aal, qofna ma garanayaa sida loo dhigo tusaale ahaan nambarka oo af Roomaaniga loogu qoro oraah qaybta hore ka dibna Carabi ka bilaabata mid sida casharku sheegayo.
Marka lambarka bogga la geliyo laba jeer ayaad gujin kartaa oo aad dooran kartaa qaabka aad u rabto (Roman, Carabi, iwm).
Hadda inaad yeelato laba qaybood oo qoraal ah mid leh lambarro Roomaan ah (tusaale: tixraac) iyo qayb kale oo leh lambarro Carabi ah (tusaale: jidhka qoraalka) waa inaad isticmaashaa qaabab laba bog ah, sida ku cad habka aan u maamulo LO:
Waxaan soo jeedinayaa layligan:
Abuur dukumiinti cusub, riix F11, sii astaamaha afaraad 'Qaababka Bogga' guji midig, dooro 'Cusub' magaca ku qor 'Roman' oo aqbal.
Midig u guji markale, dooro 'Cusub' magaca ku qor 'Carabi' oo aqbal.
Waxaad haysataa 1 dukumiinti oo leh 1 xaashi oo maran oo leh 2 bog qaabab iskood loo abuuray.
Daaqada 'Styles Styles', laba jeer guji 'Roman' (si loogu qoro qaab kasta oo bog ah xaashida, kaliya laba jeer guji qaabka inta aad ku rabto xaashida la doonayo)
Hadda geli bog jab (sida maqaalka cutubka # 8 uu leeyahay) laakiin qaab ahaan halkii 'default' u dooran lahayd 'carabi'.
Hadda waxaad haysataa 1 dukumenti oo leh 2 xaashi, qaabka ugu horreeya ee 'Roomaaniga', kan labaad 'Carabiga'.
Xitaa maadan galin lambarka bogga laakiin dhib malahan, waxaad horeyba uheesay dukumiintigaaga ... intaas kaliya maahan laakiin waxbadan oo dheeri ah:
Tag xaashida 1, lambar - bogga - lambarka bogga. Labba jeer guji lambarkaas bogga dukumiintigaaga oo dooro qaabka Roman.
Tag xaashida 2, lambar - bogga - lambarka bogga. Labba jeer guji dushiisa oo dooro qaabka Carabiga.
Markaan qoro tan, waxay igu qaadatay 10 jeer waxa ay igu qaadaneyso inaan ku dhaqmo ... ha niyad jabin, way fududahay
Wow, tusaalahaagu wuxuu ahaa mid tusaale ah, wuxuu u shaqeeyaa si qumman, inaad sidaa sameysana runtii waa macquul, waad ku mahadsantahay jawaabtaada.
Waxaan la kulmay dhibaatadan markii, qoraal ku yaal bogag badan oo horeyba loo qoray, waxaan go'aansaday inaan dhigo lambarrada. Waxaan dabool ku lahaa isla dokumentiga, sidaa darteed waxaan doonayay in bogga labaad uu noqdo nambarka 1.
1. Marka hore waxaan sameeyay wixii ku xusan boostada. Iyada oo dulqeeyaha ku yaal bogga koowaad (daboolka) ayaa loo furay «Qaabka iyo tifaftiraha qaabka», ka dibna «qaababka bogga» ayaa loo xushay halkaasna waxaa ku yaal ikhtiyaarka «bogga koowaad». Iyadoo tan, lambarka hoose uusan mar dambe ka muuqan daboolka. Laakiin, kan labaad wuxuu ahaa nambarka 2 waxaanan doonayay inay tan noqoto "1".
2. Xaaladdan oo kale, lambarka bogga labaad, halka loo yaqaan "edit field" menu ayaa furmaya (dhig tilmaamaha hortiisa lambarka bogga oo guji laba jeer). Xullo "Carabi" kuna qor "sax" (halka 0 ku muuqdo) qor "-1".
Habkaas ayaa bogga labaad u muuqanayaa lambarka 1. Haddii qiimaha "saxitaanka" uu yahay -2 tusaale ahaan, markaa lambarka 1 ayaa ka muuqan doona bogga saddexaad iyo wixii la mid ah.
In kasta oo tallaabada labaad ay ka boodi karto tan hore, haddana waxay leedahay khasaaro in booska lambarka ee bogga koowaad uu sii jiro.
Tani waxaan ku sameeyay Libre Office 3.6 iyo Open Office 4.0 waana ka wada shaqeeyay labadaba. Waxaan rajeynayaa inay kuu adeegto. Salaan.
Waxaan ku sameeyay bogga jabinta, way ii fududaatay inaan sameeyo. waxa aanan wali ogaan ayaa ah inaan badalo xogta marka laga reebo tirooyinka. Waan sharaxayaa
Shaqo inta badan waxay u horseedaa, dabool, tusmo, hordhac iyo iwm iwm ilaa ay ka gaaraan jirka shaqada. waxa aan raadiyay wax aan micno lahayn waa inaan sameeyo wax walba marka laga reebo jirka shaqada oo ay ku socdaan tirooyinka Roomaanka iyo si ay tooska u fahmaan iyaga ... Waan ogahay in meel aan ka heli doono jawaabta
Bogagga qaarkood si ay ula muuqdaan lambarro kala duwan (Roman tusaale ahaan), si fudud u dul dhig tilmaamaha bogga si wax looga beddelo, ka dib qaabka menu ayaa furmaya, xulashada "bogga" waxaan aadeynaa "bogga" tab iyo Qaybta "Dejinta Naqshadeynta", sanduuqa "Qaabka", waxaan dooranay midka nagu habboon (Roman tusaale ahaan).
Marka tan la sameeyo, markaad geliso lambarka bogga, waxay si toos ah uga muuqan doontaa qaabka la doortay. Waxa ugu fiican ee habkan ayaa ah in, haddii aan gelino tusmo, qaabka ka muuqan doona uu noqon doono midka la xushay loomana baahna in wax lagu saxo.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka !!! LibreOffice waxay ila tahay aniga xafiis fiican oo xafiis ah, khiyaamadaan iyo xogtana waa kuwo aad waxtar u leh, gaar ahaan shaqada iskuulka 🙂
Waan sameyn kari waayey 🙁 Uma beddeli karo qaababka "All", waan beddeli karaa laakiin markaa waxay gaadhaysa halkii ay taagnayd oo keliya (kala sarrayn) sidaas darteedna ma samayn karo jabin bog.
Waayahay, waxaan helay fiidiyow isna caawin kara: http://www.youtube.com/watch?v=W40Q9YUELpc
Oh, aad u fiican, way ii adeegi doontaa.
LibreOffice waxay i siisaa madax xanuun marka aan isku dayo inaan tiro nambarada, sababtoo ah ma tirinayso bilaw ilaa dhamaad, laakiin markay dareento sida ay tahay, waxay dib u bilaabeysaa nambarka mana aqaano sida looga hortago inay taasi dhacdo. Waqtigan xaadirka ah, tusaale ahaan, dukumintiga aan qorayo wuxuu kaliya dhigayaa eber iyo kuwa lambarada bogga ... Maxay taasi u dhici kartaa? Ma ii sheegi kartaa sida loo saxo?
Waad salaaman tahay Susana, waxaan kugu martiqaadayaa inaad su'aalahaaga ku weydiiso golaha, si aan si fiican kaaga caawinno.
PS: ka soo galida baarka wuu fashilmayaa laakiin waxaa laga soo gali karaa url forum.desdelinux.net
Waad salaaman tahay, sababo jira awgood, dukumintigeyga ka kooban 140-ka bog wuxuu joojiyay inuu yeesho nambar isdaba joog ah si dib loogu bilaabo bogagga qaarkood, marka hadda, tusaale ahaan, ka dib 34-ka 1 wuxuu mar kale ku bilaabanayaa lambarka hoose ee bogga. Ma aqaano sida loogu laabto lambar dhaqameedka joogtada ah. Mahadsanid!
Haddii aan haysto dukumiinti iyo bogaggeyga oo ah madaxayga iyo cagtayda oo leh qaabab horay loo qorsheeyay oo aan doonayo inaan galiyo bog cusub laakiin in madaxa iyo cagtu ixtiraamaan aniga oo aan luminaynin dejinta, maxaan sameeyaa?
Jawaab EDGAR BETANCOURT
Aad baad u mahadsantahay! Waxaan eegay casharro kale oo talaabo talaabo ah oo aan uqabayo, iyo lambarka bogga oo lagu qaso qoraalka oo aanan soo bixin -.- '
Waad ku mahadsan tahay inaad si fiican u sharaxday! hahaha 😀
Runtii dad badan oo badan oo mahadsan, waxaan qabanayaa qoraalkayga oo waxaad iga qaaday madax xanuun weyn, waxaan haystaa saacado aan isku dayayo inaan tiro u dhigo illaa aan go'aansado inaan baaro sida.
Ku jawaab Xayle
Waxaan isku dayayaa inaan ku tiro tiro bogagga leh libreoffice si ay u ahaato nooca (bogga 3 ee 45) waxaana kaliya oo aan u helaa inay ku soo baxaan bogga koowaad. Ma ogtahay sida aan ugu helo inuu dhigo bog kasta?
Aad baad u mahadsan tahay waana barnaamij fiican.
Jawaab Iñaki Mtz.
Ka soo horjeedka goobta eOS Miyaynu horey u heli doonnaa nooc deggan?